..... စိမ်းလန်းပါစေ ကမ္ဘာမြေ ... ငြိမ်းချမ်းပါစေ ကမ္ဘာမြေ .....
အခါတစ်ပါးမှာ ကျွန်ုပ်တောင်ငူသားတစ်ယောက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ် အလည်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးသကာလ အဘယ်ဌာနသို့ ဦးစွာပထမ သွားရအံ့ဟု ကြည့်လေသော် ဘိလပ်လို့ အမည်တပ်တဲ့ အနောက်အရပ်ဆီသို့ ဦးတည်မိချေပြီတည့်။ အသို့ဆိုသော် ဘိလပ်တစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လည်ပတ်မွှေနှောက် ပြီးသည်၏နောက်တွင်ကား မပြန်ခင်တစ်ရက် လုံဒုံမြို့ရဲ့ လမ်းများပေါ် တစ်ကိုယ်တော်ရွက်လွှင့် နေဖြစ်ခဲ့ချေသည်။ တစ်နေရာအရောက်တွင်ကား သူငယ်လေးတစ်ယောက် ဘုတ်အုပ်သဏ္ဍာန် မဲမဲအရာကလေးပိုက်လျက် မတ်တပ်လျှောက်လာသည်ကို မြင်ချေသော် ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ မြင်ဖူးသလိုရှိသောစိမ့်ငှာ အနီးရောက်သောအခါမှ-
“အလို ဘယ်သူများမှတ်တယ် ရိုမီရိုငယ် ပါကလား” ဟု ဆိုမိချေ၏။ အမောင်သကောင့်သားကလေးက
“ဟား ကိုတောင်ငူငယ်။ မတွေ့ရတာ အတော်ကြာ စကားစမြည်ပြောရအောင် လာဗျာ ကျွန်တော် ဒကာခံပါ့မယ်”
ဟု သိတတ်လှစွာ လောကဝတ်ပြုချေသော် ငြင်းရန်မသင့်ဟု အလိုလိုသိနေသောစိတ်က ဆုံးဖြတ်လျက် အနီးအပါးရှိ အဖီလေးချကာ ဖွင့်ထားသော အအေးဆိုင်ငယ်လေးအတွင်းသို့ ဝင်လိုက်မိချေ၏။
“ကဲ ဆိုပါဦး အမောင်ငယ် ဘယ်တွေသွားလို့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ ဂျူးလိယက်လေးနဲ့ ဆုံဖြစ်ရဲ့လား။ နို့ မင့်လက်ထဲကကော ဘာများလဲကွယ့်”
“အာ.. ကိုတောင်ငူကြီး မေးခွန်းတွေများသလောက် ခေတ်နောက်ရောက်နေမှကိုး။ အခုကျွန်တော် ဂျူဂျူးငယ်နဲ့ အောက်ဒိုး မတွေ့ကြတော့ဘူးဗျ။ ဆရာကြီးရှိတ် ဆီမှာ သင်တန်းပြီးကတည်းက အွန်ဒိုး အဲ..အဲ.. အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ တွေ့တော့တယ်”
“ဘယ်လို ဘယ်လို။ အွန်လိုင်း ဟုတ်စ။ အမောင်ငယ်ရဲ့ လင်းစမ်းပါဦး ကျွန်ုပ်နားမရှင်းလို့”
“ကျွတ်.. ကိုတောင်ငူကြီးက ဗျာ။ အင်တာနက်တို့ အီးမေးလ်တို့ ဒီလောက်တောင် ဖလန်းဖလန်းထ နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဝေးရန်ကော”
ဟူ၍ အစချီကာ မဲမဲသဏ္ဍာန် ဘုတ်အုပ်လေးအဆုံး စုံစီနဖာ အကုန်ဋီကာ ဖွင့်ပြပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်သည်ကား ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် အံ့မခန်းလှသော လောကဓါတ်ပညာများကို ရင်သပ်ရှုမော နစ်မြောခဲ့ရပေ၏။ အနှစ်ချုပ်သည်ကား အနှီရိုမီရိုသူငယ်နှင့် ဂျုးလိယက်သူငယ်မ ချစ်သူနှစ်ဦးတို့သည် အွန်လိုင်းပေါ်မှာသာ ဂျီတော့ဖွင့်၍ ကျူကြလျက် အယူသည်း(သီး)တဲ့ လူကြီးတွေ မရိပ်မိဘဲ ရှိလေသဖြင့် အင်မတိအင်မတန်မှ အဆင်ပြေလျက်ရှိကြကြောင်း သိခဲ့ရပေသည်။ အနှီသကောင့်သားကလေး အမောင်ရိုမီရိုငယ် ဧည့်ခံသော ဒိုမီနိုတစ်ပန်းကန်မောက်မောက်ကို မြိန်မြိန်ကြီး သောက်ပြီးနောက်ဝယ် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်း လက်ပြနှုတ်ဆက် လမ်းခွဲခဲ့ကြပေ၏တည်း။
ဘိလပ်က ပြန်ရောက်ပြီးတွင်မတော့ အနှီအင်တာနက်ဆိုသော လောကဓါတ်ပညာက ဖန်တီးလိုက်သော သတ္တဝါကလေးသည် ကျွန်ုပ်အား ကလူကျီစယ် နှိပ်စက်ဘိချေတော့၏။ ရိုမီရိုငယ်ရဲ့ ဆိုပုံအရ အပုံကြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေရှိသော ထိုသတ္တဝါကလေးအကြောင်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိစိမ့်ရန်အလို့ငှာ ဒဂုံမြို့တော်တစ်ဝှန်း သင်တန်းအရှာ ထွက်ခဲ့ချေတော့၏။ လျှမ်းလျှမ်းတောက် သင်တန်းတို့ တည်ရှိရာ ဒေါင်းတောင်းဧရိယာ တစ်လျှောက် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်မိလတ်သော် အင်မတန်သင့်လျော်သော သင်တန်းကြီးတစ်ခုသို့ စာရင်းသွင်းမိပြီးဖြစ်တော့၏။ သင်တန်းခန်းမ အအေးခန်းအတွင်း ချင်းနင်းဝင်ရောက်ပြီးသကာလ ထိုင်ခုံပေါ် အသာထိုင်မိဆဲခဏ ထိုကာလဝယ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လာချေပြီကော။
“အို နန္ဒာမင်းသား။ ဘယ့်နှယ် မာဖီကြီးနဲ့ပါလား” ဟု ကျွန်ုပ်က အမေးရှိသော်
“ရှူး.. တိုးတိုးဟ။ တောင်ငူငယ်ရ။ ငါကိုယ်တော် ရုပ်ဖျက် နှုတ်မဆက်ဘဲ ထွက်လာ နန်းတော်ထဲက အသာခွာခဲ့တာကွယ့်”
“သြော်.. တောင်ငူငယ် မသိလေတော့ ပြောရတော့မပေါ့။ ငါကိုယ်တော်ရဲ့ ငမိုးရိပ်ကြီးနဲ့ အန္တာရယ်တလှပ်လှပ်ကြားက ရန်ကုန်မြစ် တစ်ဖက်ကမ်းဖြတ် အကူးမတတ်ရင် ဒလက နှမတော် မွေ့လေး တွေ့ဖို့အရေး စိတ်မအေးရဘူးကွယ်။ ဒီကြားထဲ နာဂစ်က အသာနှာကစ်သွားရင် ငါ မသာမယာ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကွယ့်။ ဒီတော့ နှမတော် ရှင်မွေ့နွမ်းနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းကြည်ဖို့အရေး ဂျီတော့ကလေး သုံးဖို့ ငါကိုယ်တော် ရုပ်ဖျက် သင်တန်းတက် ထွက်ခဲ့တာကွယ့်”
ဟု မိန့်ကြားပြီးသကာလ သင်ခန်းစာဖက် တစ်ခါတက်ခဲ့ပြန်ပေ၏။ အနို့ကလို သို့ကလိုဖြင့် ကျွန်ုပ် တောင်ငူသားကလေးသည် သင်တန်းအောင်မြင် ပေါက်မြောက်ပြီး သကာလ မပြန်တာကြာပြီဖြစ်သော မွေးရပ်ဌာနေ ကေတုမြေသို့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မော်တော်ကားဖြင့် သွားခဲ့လေသောဟူ၏။ ကေတုမြေသို့အရောက် တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး အဝစားပြီးနောက်ဝယ် ကန်တော်တစ်ပတ် လေညှင်းခံထွက်ခဲ့ချေ၏။ လေးကျွန်းကန်တော်ကြီးတစ်ပတ် မရပ်မနား ဆက်သွားပြီးသကာလ ကန်တော်အနောက်ရောက်လေသော် ရွိုင်ရယ်ကေတုမတီ ဟော်တယ်ကြီးက ထီးထီးမားမားရှိနေပြီတည့်။ အနှီဟော်တယ်တည်ရာ ကွင်းပြင်တစ်လျှောက်သည်ကား တောင်ငူသားကလေးတို့ နုနုနယ်နယ် ပျိုရွယ်စဉ်ကာလက ကစားဖော်သူငယ်ချင်း နှစ်သင်းစာနဲ့ ပေါပေါများများ ဘောကစားချင်းအမှုကို ပြုခဲ့ကြသည်တို့အား ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ချေသော် မျက်ဝန်းအိမ်ထဲဝယ် ပုလဲငွေဥ ဘုစုခရုတို့ စုလာမိချေသည်တမုံ့။ ထိုမှတလှပ် အနောက်ရပ်ကို ယွန်းသော် တောင်ငူမင်းအဆက်ဆက်တို့ စစ်မတိုက်မီ အောင်မြင်စေကြောင်း တောင်းဆုပြုခေါ် ကောင်းမှုတော် ဟု ဘွဲ့မည်နာမ အမည်ရသော ဘုရားဆီသို့ ဦးညွတ်ဝပ်တွား ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားဖို့အလို့ငှာ သွားဖူးခဲ့ချေသည်။ ရင်ပြင်တော်တစ်နေရာ အောင်မြေသာဝယ် ချပ်ဝတ်တန်ဆာ စုံလင်စွာဖြင့် အလို ဘယ်သူများပါလိမ့်။
“ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ ကိုယ်တော်လေး”
“အိမ်း မောင်မင်းပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် ကိုယ်ကျန်းမာသော်လည်း စိတ်တော့ တယ်မချမ်းသာချင်ဘူးကွဲ့”
“အဘယ်အရေးကြောင့် ရတက်မအေးနိုင် ပူဆွေးဖြိုင်နေရလဲ ကိုယ်တော်လေးရဲ့”
“ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ ထွက်ခွာဖို့အရေး အောင်မြေနင်းရင်းဆုတောင်း ရကောင်းသော်လည်း ငါကိုယ်တော်ရဲ့ ကျေးသားလိမ္မာ ထိုသတ္တဝါကလေး ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်ချင်ချင်မို့၊ ဓါတုကလျာ မဖုရားထံပါး ကျေးစေတမန်နဲ့ ရတုဆက် ပျက်ကွက်မိမှာတွေး ရတက်မအေးဘဲ စိတ်တွေလေးနေသကွဲ့ မောင်မင်းရဲ့”
“ဘဇာအရေးကြောင့်ဖြင့် ရွှေစိတ်တော်ဘဝင် မတင်မကျ ဖြစ်စရာမလ၊ို ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ ဘယ်နေရာကျကျ၊ စပ်ချင်ရာစပ် ဆိုချင်ရာဆို၊ ထိပ်ထားဒေဝီ သခင်မဆီအရောက် ကြိုးပျောက်စနစ်နဲ့ ရတုဆက် မပျက်မကွက် ကြူနိုင် မူပိုင်အစစ်ဖြစ်ကြောင်း ချစ်သက်သေထူပါတော့ ကိုယ်တော်လေးသခင် နောင်နတ်သျှင်ဘုရား”
ဟူ၍ လျှောက်တင်ချေသော် နတ်သျှင်ကိုယ်တော်လေးမှာ ရွှေစိတ်တော်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရသည့်အခိုက်ဝယ် အကြံကောင်းလျှောက်တင် အသင့်အတွက်-
“မဒီကညာလေးများနဲ့ ပလီပလာကြေး(ဂျီး) များမနေဘဲ ကြည်သာတေးသွားမှာ ဘီယာလေးဂျားနဲ့ ခံစားစေ”
ဟု ဆုလာဘ်တော်ချ တောင်ငူသားတစ်ယောက် ပွခဲ့ရပါလေတော့သတည်း။
Posted by Taungoo at 2:22 AM
ဆရာကြီး ဂျက် စတိုင်ပဲ။
Moe Cho Thinn
September 27, 2008 at 3:23 AM
September 27, 2008 at 9:26 AM
ဖတ်သွား၏။ ဂျီတော့နှင့် ကြူသူများ တွေ့ရင် ပြုံးပျော်ကြမယ်။
September 27, 2008 at 11:25 PM
ကောင်းသည်မကောင်းသည် အပထား. ကွန်မန့် များများရေးပေးကြပါဗျို့။ မဟုတ်ရင် ကိုတောင်ငူသား ကိုယ့်ကို ကိုယ် suicide လုပ်ပြီး ဘလော့ လောကကနေ ထွက်ခွာသွားအုံးမယ်။ နောက်တာနော်၊ အတည်ပြောတာ။
September 29, 2008 at 9:21 AM
အဲလိုမရေးတတ်ဘူး… ရေးတတ်တဲ့သူရေးတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ… once more… နောင်လဲ ဒါမျိုးလေးတွေ ရေးပါဦးကိုတောင်ငူရေ…
အရမ်းကောင်းပါတယ်.. တင်ပြထားပုံ.. စကားသုံးနှုန်းပုံလေးတွေ ထိမိပီပြင်ပါတယ်.. အခုလို စာကောင်းလေးတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
October 1, 2008 at 12:44 AM
ဘာသာရေး၊ ကုသိုလ်ရေး (4)
နှစ် ၅၀၀ ပြည့် တောင်ငူ
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၈၇၂)ခု တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ဘုရင်မင်းကြီးညို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ကေတုမတီ တောင်ငူမြို့၏ သက်တမ်းမှာ ယခုနှစ် (၁၃၇၂)ခု တန်ေ...
အဝါ၊ အစိမ်း နှင့် အနီရောင်တို့ကို ထင်ရှားစွာ အများဆုံး အသုံးပြုထားသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတို့၏ နိုင်ငံတော်အလံများကို ရှာဖွေလေ့လာကြည့်ရာ ဥရေ...
အရံ / မင်္ဂလာဦးည
“အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုး၊ ဤသုံးခု ချက်မပိုင်လျှင်၊ နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့်မျိုး”ဆိုတာ မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ စကားတစ်ခ...
အနှစ် ၉၀ ပြည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့
၁၉၂၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သည် ယခု ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အနှစ် ၉၀ တိတိ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ၁၉၂၀ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ပထမဆုံး ...
တောင်ငူကနေ ရန်ကုန်ဆင်းလာကတည်းက အောင်မင်္ဂလာဂိတ်မှာ ကင်ပွန်းစခန်းထိ ရောက်တဲ့ Express ကားတွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဖုံးနံပါတ်တွေ မှတ်လာခဲ့တယ်။ လက်မှ...
Local journal, magazine and newspaper
Biweekly Eleven ဂျာနယ်
Eleven News ဂျာနယ်
The Voice ဂျာနယ်
Today group မဂ္ဂဇင်းများ
ထင်းခုတ်စားကြတယ် - ထင်းခုတ်စားကြတယ် November 6, 2011 at 9:13am ထင်းခုတ်စားကြတယ်.. ဂေါ်ကီပြောသလို (ဂေါ်ကီ ရေးတဲ့ အမေဝတ္ထုထဲမှာလို့ ထင်တာပဲ) ထောင်ဆိုတာ အစိုးရက စေတနာ ဗလပွနဲ့ ဆောက...
စောင်ငှက်လက်ထက် ဒီမိုပျက် ရှစ်လေးလုံးအခက် - ကေကျုတို့ ရှစ်လေးလုံးပါတီကို ရွေးကော်က ကန့်ကွက်သူရှိလို့ နံမယ်ပြောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ မူလတင်တဲ့နံမယ်က ရှစ်လေးလုံးပါတီ နောက်တော့ ရှစ်လေးလုံးနံမယ်ကို တပါတီတစု...
ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ - သင်ခန်းစာနော် တယောက်ယောက် မှားသွားရင်၊ လွဲသွားရင်၊ ချာသွားရင် အပြစ်ပြောရတာ၊ ကဲ့ရဲ့ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ခက်တာက သူများအမှားကနေ ကိုယ့်အတွက် အမြတ်ထုတ်တတ်ဖို့ပါ။ နိုင...
မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ထွေရာလေးပါး - မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အခါ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူတေ...
ရှိခိုးတိုင်း သရဏဂုံမဖြစ် - ရှိခိုးတိုင်း သရဏဂုံမဖြစ် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို ရှိခိုးတိုင်း သရဏဂုံမဖြစ်။ ယုံကြည်ဆည်းကပ်မှု မဟုတ်။ သီလ သမာဓိ ပညာ အကျင့်တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ မြင့်မြတ...
Friendly, Interesting & Attractive
The Buddha and Atheists - လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ လောက်က ဘလော့ပေါ်မှာ “Freethinkers နှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီဃနခ လို့ခေါ်တဲ့ Atheist ပရိဗိုဇ်တဦးနဲ့ ဗုဒ္ဓ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်...
Result of True Learning - ကိုယ်တွေ ဒီ Logistics နယ်ပယ်ထဲကို ရောက်ပြီး အလုပ် လုပ်နေပေမယ့် တကယ်တမ်း စလုပ်တုန်းက ဘာဆိုဘာမှ မသိခဲ့သူပါ။ ဒီအလုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေ ဘာသာရပ်တွေ ဆိုတ...
ပုဂ္ဂလိကလက်ထဲကမြန်မာဆန်စပါးလုပ်ငန်း (အဆက်) - စပါးဆန်သိုလှောင်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံသည်ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတုရှိသည့်tropical zone ထဲ တွင်ကျရောက်သောကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံများသိုလှောင်ရာတွင်ရာသီဥတုကိုဂရုမစိ...
အသံမြည်နေတဲ့ တံခါး - တံခါးဟာ အသံမြည်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်… တံခါးအများစုဟာ အဖွင့် အပိတ်လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ အသံမြည်နေတတ်တယ်။ ဖြည်းဖြည်းပိတ်ရင် အသံတိုးတိုးမြည်သလို ကြမ်းကြမ်းပိတ်မိရင်တော...
၀က်နံရိုး အကြွတ်ကြော် - ၀က်နံရိုး ၅၀၀ ဂရမ် ကို တစ်လက်မ ပတ်လည်ခန့် အတုံးသေးလေးတွေ တုံးပါ။ ပြီးလျှင် တရုတ် ဟင်းချက်ဝိုင် ၃ဇွန်း၊ နှမ်းဆီ တစ်ဇွန်း၊ သကြား၃ ဇွန်း၊ ဟင်းခတ်မှုန့် ဇွန်း ...
Halal food alternatives in Taiwan - Vegetarian meals - Since finding halal food can be quite cumbersome in Taiwan, you can go for vegetarian meals as an alternative. Most Taiwanese practice Mahayana Buddhism wh...
လူသစ် - နေရာတနေရာမှာ လူသစ်တစ်ယောက်အဖြစ် စရတာ မလွယ်ဘူး ဆိုတာသိပေမဲ့ အခု အသက်ကြီး လာတော့ ပိုခက်မှန်းသိလာတယ်။ ကျမ ဂျာမနီကို စရောက်တော့ အသက် ၃၀။ ဘ၀ ကို အစကပြန်စခဲ့ရတယ်။...
" အစဉ်ထာဝရ " ( ၂၂ ) - [ ၁၂ ] အာခီအဆောင်(ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာအဆောင်)အဆောင် ၅နှင့်ယောကျာ်းလေးများ နားနေဆောင်( MCR - Men Common Room) ကြားမှကွန်ကရစ်လမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်ရင်းသူတို့အုပ...
၈၈ က ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ကောလဟာလများ (၂) - ကျနော်တို့ အဖေတွေက အဲဒီ ခေတ်အခါမှာ ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက် ရှိကြတဲ့ 'လူကြီး' တွေ ဆိုတာကို ပြောထားခဲ့ ပြီးပါပြီ။ ဒီအခါ စာဖတ်တဲ့သူ အချို့က ကျနော်တို့ အပြင်လူတွေ...
ချယ်ရီပန်းတို့ ပွင့်ဝေချိန် - ယခုလို ဇန်နဝါရီလလိုမျိုးမှာ ပြင်ဦးလွင်မှာဆိုရင် ချယ်ရီတွေလှလှပပ ပွင့်ဝေလို့ နေကြပြီ။ ရှမ်းတောင်တန်း တွေပေါ်မှာလည်း ချယ်ရီတွေ ဝေဝေဆာဆာ ဖူးပွင့်လို့ နေပါပြီ...
Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း ၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်၏ မွေးနေ့အရုဏ်ဆွမ်းအလှူနှင့် ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူရှင်များ မွေးနေ့ဆွမ်းအလှူ ၂၃.၈.၂၀၁၃ - သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၇ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ ခု ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁) ရက် ၊ ၂၃.၉.၈.၂၀၁၃ သောကြာနေ့ အရုဏ် မုန့်ဟင်းခါးဆွမ်းကပ်လှူခြင်း ကုသိုလ်ရှင် Dr.မြတ်ဥာဏ်+ေ...
ရှမျးပွညျ ကြောကျမီးသှေးစကျရုံ ဆကျလညျပတျလို့ ထပျကနျ့ကှကျ - တီကဈြစကျရုံကွောငျ့ ကြေးရှာ ၂၂ ရှာကြျောက သောငျးနဲ့ခြီတဲ့ ဒသေခံတှကေို သကျရောကျ
ဟောလိဝုဒ် စွန့်စားခရီးသွား ဟာသဒရာမာ ပရိသတ်အကြိုက် Boundaries ရုပ်ရှင် (နမူနာ) - ဟောလိဝုဒ် စွန့်စားခရီးသွား ဟာသဒရာမာ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Boundaries အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို လာမယ့် ဇွန်လ[...]
ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် တကယ်စစ်၏ မစစ်၏ - ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၈ - တရုတ်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချလောက်သော စီးပွာဘက် ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီပေါမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း ...
Copyright 2009 - တောင်ငူသား